Famoahana fanahy ratsy - Wikipedia
Ny famoahana fanahy ratsy na fandroahana fanahy ratsy, dia fanao ao amin' ny fivavahana na amin' ny fanaovana hatsarana izay anafahana ny olona iray na ny toerana iray amin' ny fanahy ratsy mipetraka aminy na mikasa hipetraka aminy. Ny Kristiana dia manao hoe famoahana na fandroahana demonia na demony.
Masindahy Francis Borgia mandroaka demonia amin'ny olona miala aina, nataon'i Francisco Goya.
Ny fandroahana fanahy ratsy dia matetika sahanin' olona manana fahefana ara-pivavahana manokana, ka mety ho pretra na karazana ombiasa, ohatra, izany.
1 Famoahana fanahy ratsy teo amin' ireo fivavahana tamin' ny Andro Taloha
2 Famoahana fanahy ratsy ao amin' ireo fivavahana abrahamika
2.1 Famoahana demonia ao amin' ny jodaisma
2.2 Famoahana demonia ao amin' ny kristianisma
2.2.1 Ao amin' ny Testamenta Vaovao
2.2.2 Fanaon' ny Kristiana taty aorian' ny andron' ny Apôstôly
2.3 Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny finoana silamo
3 Famoahana fanahy ratsy ao amin' ireo fivavahana any Azia
3.1 Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny bodisma
3.2 Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny hindoisma
3.3 Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny taôisma
Famoahana fanahy ratsy teo amin' ireo fivavahana tamin' ny Andro TalohaHanova
Teo amin' ny fiarahamonina tamin' ny Andro Taloha dia nankinina amin' ny fanaovana majika ny fandroahana fanahy ratsy. Ny Babiloniana dia nanana mpisorona (pretra) manokana izay manimba ny sarin' ny demony vita amin' ny fotaka na lasira mba hamotehana ny demony. Misy fomb afomba hafa atao sahalahala amin' izany koa ny teo amin' ireo Egiptiana sy Grika tamin' ny Andro Taloha. Ankehitriny dia maro ireo fivavahana izay mbola mandroaka fanahy ratsy na demony.
Fanao hita saika maneran-tany ny fandroahana fanahy ratsy. Tokony ho efa hita tany Mesôpôtamia izany tamin' ny taonarivo faha-2 tal. J.K. ary hita porofo fa nisy izy io tany tamin' ny taonarivo voalohany tal. J.K.
Famoahana fanahy ratsy ao amin' ireo fivavahana abrahamikaHanova
Famoahana demonia ao amin' ny jodaismaHanova
Mety ho avy amin' ireo vahoaka semita tamin' ny Andro Taloha no nipoiran' ny famoahana fanahy ratsy, araka ny hita ao amin' ny Bokin' ny Levitikosy na Levitika (Lev. 16.20-22) ao amin' ny Baiboly.
I Flavio Josefa dia mitatitra fa ny fandroahana demonia dia notanterahina amin' ny fanomezana ranon-javatra avy amin' ny fakan-javamaniry mahafaty sy zavatra hafa amin' ny alalan' ny fanaovana sorona.
Ny raby Yehuda Fetaya (1859-1942) dia nanoratra ny boky atao hoe Minchat Yahuda izay mamelabelatra ny amin' ny famoahana fanahy ratsy, sy ny zavatra niainany miaraka amin' ireo olona itoeran' ny fanahy ratsy, sy ny lohahevitry ny fandinihana jiosy. Io boky io dia voasoratra amin' ny fiteny hebreo fa nadika amin' ny teny anglisy taty aoriana.
Ny fombafomba fanao amin' ny fandroahana fanahy ratsy dia tanterahin' ny raby izay mahafehy tsara ny fanao amin' ny Kabala. Tokony hatrehin' ny minyan (vondron-dehilahy folo), izay mivory manao faribolana manodidina ilay olona itoeran'ny fanahy ratsy. Manonona ny Salamo faha-91 intelo izy ireo avy eo mitsoka tandrok' ondry (shofar) ny raby.
Tsofina hamoaka feo hafahafa sy amin'ny haavom-peo samihafa ny shofar mba "hahatonga ny vatana ho vaky" ka hahafahan' ny hery ratsy mitoetra ao aminy hivoaka. Rehefa avy nohozongozonina ilay olona itoeran' ny fanahy ratsy dia miteny aminy amin' izay ilay raby sady manontany azy toy izao: inona no antony itoeran' ny fanahy ratsy ao amin' ny vatan' ilay olona? Afaka mivavaka ho azy sady afaka manomana fombafomba ny minyan mba hahazoany antoka tsara ny handaozany ny vatan' ilay olona.
Famoahana demonia ao amin' ny kristianismaHanova
I Jesosy mamoaka demonia avy amin'ilay moana, sary nataon'i Gustav Dore, 1865.
Ao amin' ny Baiboly dia ahitana andalana mitantara fandroahana demonia. Mitantara an' i Jesoa mandroaka demonia amin' ny alalan' ny vavaka sy ny fahefana ahafahany mandidy ny ao amin' ny Testamenta Vaovao. Ao amin' ny Fiangonana katôlika dia asa manokana sahanin' ny eveka sy ny pretra mpisolo azy ny fandroahana demony. Ny fiomanana amin' ny fanaovam-batemy no anaovana azy. Mbola notazonina ho fanao ao amin' ny Fiangonana loterana ny famoahana demonia.
Nanatanteraka famoahana demonia matetika i Jesoa araka ny hita ao amin' ireo evanjely, indrindra ny Evanjelin' i Matio sy ny an' i Marka ary ny an' i Lioka (jereo ohatra: Mat. 8.28-34; Mat. 9.32-34; Mat. 12.22-24; Mat. 15.21-28; Mar. 1.23-28; Mar. 5.1-20; Lio. 4.33-36; Lio. 8.26-39; Lio. 11-14; Lio. 13.10-17).
Fanaon' ny Kristiana taty aorian' ny andron' ny ApôstôlyHanova
Ny fandroahana demonia dia fanao mahazatra raha ny tantaran' ny fivavahana katôlika no heverina, indrindra tamin' ny Andro Antenatenany, sy teo amin' ny loteranisma, ka mbola misy izany mandraka androany, na am-panoharana na amin' ny alalan' ny sakramenta (ny batisa), na eo amin' ny fanao mahazatra (izay iandraiketan' ny pretra katôlika mpamoaka demony).
Ao amin' ny fivavahana kristiana dia atao hoe famoahana demonia na famoahana demony ny fandroahana ny fanahy ratsy. Amin' ny fanao kristiana dia matetika mivavaka ny mpandroaka demonia sady mampiasa fehezanteny voafaritra mazava tsara, fihetsika, famantarana, sary masina, zavatra madinika toy ny firavaka, sns. Miantso an' Andriamanitra na an' i Jesoa na ny anjely mba hanampy izy ireo. Amin' ny ankapobeny ny Prôtestanta mpamoaka demonia dia mino fa ny fahefana nomen' Andrimanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina (ny Trinite) azy ireo no ahafahan' izy ireo mandroaka ny demonia.
Amin' ny ankapobeny, ireo olona heverina fa misy demonia (na demony), izay atao hoe demoniaka, dia tsy heverina ho marary saina, sady tsy tompon' andraikitra amin' ny zavatra ataony (tsy tompon' ny tenany), satria ny fipetrahany amin' ny olona iray dia heverina ho asan' ny demonia izay mahatonga zava-dratsy amin' ilay olona na amin' olon-kafa. Noho izany dia mihevitra ny famoahana demonia ho toy ny fanafody ny mpandroaka demonia fa tsy ho toy ny sazy. Ny fombafomba mahazatra nifandovana dia mampifanaraka ny toe-java-misy amin' ny fisiana na ny tsy fisian' ny herisetran' ilay olona manana demonia, ka raha atahorana hisy herisetra dia fatorana ilay olona manana demonia.
Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny finoana silamoHanova
Ao amin' ny fivavahana silamo dia inoana fa manana fahefana mamoaka fanahy ratsy ny boky Kor'any amin' ny alalan' ny fanao miafina atao hoe Rukiya (arabo: الرقية) izay iadiana amin' ny jiny.
Ao amin' ny finoana silamo, rehefa avoaka ny fanahy ratsy dia ampandrina ilay olona misy an' io fanahy io, ary misy mpitarika fivavahana (sheikh) mametra-tanana amin' ny lohan' ilay marary sady manonona andininy vitsivitsy avy ao amin' ny Kor'any, nefa malalaka fa tsy voatery ny fanaovana izany. Ny fampinomana na ny fanondrahana rano voahasina (rano avy amin' ny vovon' i Zamzam) dia mety hisy, ary koa ny fanisiana ranomanitra atokana ho amin' izany vita amin' ny alkaola atao hoe ittar.
Misy andinin-tsoratra avy ao amin' ny Kor'any tononina, izay anomezam-boninahitra an' Andriamanitra (ohatra, ny andinin' ny Sezafiandrianana (arabo: آية الكرسي / Ayatul Kursi)) sy mangataka ny fanampian' Andriamanitra. Amin' ny tranga sasany dia ny adhan (fiantsoana amin' ny vavaka isan' andro) dia vakina koa, noho izy io afaka mandroaka ireo zavaboary tsy hita maso nefa tsy anjely atao hoe jiny.
Ny mpaminany Mohamady dia nampianatra an' ireo mpianany mba hamaky ny soràta telo farany ao amin' ny Kor'any, dia ny soràta Al-Ikhkas (ny Fahatokiana) sy ny soràta Al-Falaq (ny Mangirandratsy) ary ny sorata An-Nas (ny Olombelona rehetra).
Misy hadita (hadith) iray voasoratra ao amin' ny Sahih al-Buhari (8.76.470) izay milaza hoe "Ny fitopolo amin' ny mpianatro dia hiditra any am-Paradisa tsy ilana tatitra, ary ireo dia izay tsy manao ny Ar-Ruqya sy tsy mahita fambara ratsy, ary mametraka ny fitokisany amin' ny Tompo". I Ibn Qayyim al-Jawziyya, manam-pahaizana, dia nanao fivoasana ity hadita ity ka nanambara toy izao: Satria ireo olona ireo hiditra any am-Paradisa nefa tsy natsoina hanao tatitra noho ny fahatongalafatry ny Tawhid nataony, dia voalazalaza ho olona tsy nangataka amin' olon-kafa hanome azy ireo ruqyah. Izany no itenenany hoe: "ary nametraka ny fitokisany amin' ny Tompo izy ireo". Noho io fitokisany tanteraka ny Tompo io sy noho ny fianinany aminy, noho ny finoany azy, noho ny fahafaham-pony amin' ny zavatra ilain' izy ireo, dia tsy misy zavatra angatahin' izy ireo amin' ny olona, na ruqyah izany na zavatra hafa, ary tsy voataon' ny fambara sy ny finoanoam-poana izay mety hisakana azy ireo tsy hanatanteraka izay zavatra tian' izy ireo hatao, satria ny finoanoam-poana dia manimba sady mampalemy ny Tawhid" (ny Tawhid dia fanekem-pinoan' ny Miozolmana).
Famoahana fanahy ratsy ao amin' ireo fivavahana any AziaHanova
Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny bodismaHanova
Ny fombafomba atao amin' ny andro fandroahana matoatoa dia isan' ny fomban-drazana tibetàna. Ny lanonana ara-pivavahana tibetàna atao hoe དགུ་ གཏོར་ ༽ / gutor, izay omena ara-bakiteny amin' ny faha-29n' ny volana faha-12 amin' ny tetiandro tibetàna sady atao mba handroahana ny zavatra ratsy rehetra, isan' izany ny fanahy ratsy sy ny loza nitranga tamin' ny taona efa lasa, ary hanombohana taona vaovao anjakan' ny fiadanana sy ny fahavokarana.
Ny tempoly sy ny mônastera any Tibeta dia mikarakara lanonana lehibe ahitana dihy ara-pivavahana, ka ny tena lehibe amin' izany dia tanterahina ao amin' ny lapan' i Potala ao Lhassa. Manadio ny tranony ny isam-pianakaviana amin' io andro io, manaingo ny efitranony sady misakafo lasopy natokana ho amin' izany izay voavoatra amin' ny paty atao hoe དགུ་ ཐུག་ ༽ / guthuk. Amin' ny hariva dia mitondra lamba faneva sy miantsoantso ny teny fandroahana matoatoa ny vahoaka.
Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny hindoismaHanova
Sarin'i Hanuman ao amin'ny tempolin'i Hanuman ao Singapora
Ny zavatra inoana momba ny fandroahana fanahy ratsy sy ny fombafomba fanao momba izany dia mifamatotra amin' ny finoan' ny Hindo. Amin' ireo Veda efatra (boky masin' ny Hindo) dia ny Atharva Veda no misy ny tsiambaratelon' ny famoahana fanahy ratsy, ny fanaovana hatsarana ary ny alsimia . Ny fitaovana fototra ampiasaina amin' ny famoahana fanahy ratsy dia ny mantra sy ny yajna ampiasaina ao amin' ny fomba fanao ampianarina na ao amin' ny Veda na ao amin' ny Tantra. Fanaon' ny Vaishnava ny mampiasa manonona ireo anaran' ny Narasimha sy famakiana ny Soratra Masina, indrindra ny Bhagavata Purana, amin' ny feo mafy.
Araka an' i Gita Mahatmya ao amin' ny Padma Purana, ny famakiana ny toko faha-3 sy faha-7 ary faha-9n' ny Bhagavad Gita sy ny fanomezana ny vokatr' izany an' eritreritra ho an' ireo olona efa maty dia manampy azy ireo hivoaka ny toetra maha matoatoa azy ireo. Ny Kirtan, izay ilalaovana mitohy ny mantra, izay itehirizana ny Soratra Masina sy ny sary masin' ireo andriamanitra (Shiva, Vishnu, Hanuman, Brahma, Shakti, sns) (indrindra ny an' i Narasimha) ao an-trano, andoroana emboka manitra atao fanatitra mandritra ny Puja, anondrahana rano avy amin' ny renirano masina sy ny fitsofana antsiva amin' ny Puja dia fanao mahomby koa. Inoana koa fa ny vavaka amin' ny Tompo Hanuman dia ahazoam-bokatra tsara indrindra. Voalaza ao amin' ny Hanuman Chalisa koa izany. Inoana fa ny fanononana fotsiny ny anaran' ny Tompo Hanuman dia mampangovitra amin-tahotra ireo hery ratsy sy ny devoly.
Ny Garuda Purana no lohatrano fototra ahazoana fahalalana araka ny purana momba ny matoatoa sy ny fahafatesana.
Ny firesahana feno ny amin' ny fahaterahana sy ny fahafatesana ary ny fanahin' olombelona dia hazavaina ao amin' ny Katō Upanishad, izay ampahan' ny Yajur Veda. Misy famintinana an' io boky io azo vakina ao amin' ny soratra mitokana atao hoe Kāttakaṃ.
Famoahana fanahy ratsy ao amin' ny taôismaHanova
Ao amin' ny taôisma dia fanao ny famoahana fanahy ratsy satria misy olona ipetrahan' ny fanahy ratsy noho ny iray amin' ireto antony roa manaraka ireto. Nanabataba matoatoa ilay olona, tsy manova zavatra ny mety ho tanjony tamin' izany, ka manao izay hamaliany faty amin' izay ilay matoatoa. Ny olona mbola velona iray dia mety hanam-pialonana sy hampiasa ny majika mainty hamaliana faty, ka maniraka matoatoa hipetraka amin' ny olona iray. Misy mpikambana ao amin' ny fashi, manamboninahitra sy mpisorona (pretra) amin' ny fivavahana sinoa atokan' ny tompon-danitra, izay manatanteraka fombafomba sinoa, indrindra ny famoahana fanahy ratsy.
Ny famoahana fanahy ratsy atao ao amin' ny taôisma, araka ny fomba nifandovana, dia ahitana hira sy fihetsiky ny vatana ary vavaka atao handroahana ny fanahy ratsy. Amin' ny fotoan' ny firavoravoana no isehoan' izany fombafomba izany. Izany fombafomba izany dia heverina ho zava-dehibe amin' ny lanonam-piravoravoana. Natao hialam-boly indrindra izany fa tsy tena ilaina amin' ilay lanonana.
Ireo mpitarika ny famoahana fanahy ratsy dia mamorona fampisehoana an-tsehatra iantsoana ny demony mba hisian' ny fiadanana eo an-tanana. Ireo mpitarika ireo dia mifampikapoka amin' ny fitaovam-piadiana maranitra sady mifandratra mivoa-dra. Heveria ho fiaro izany ra izany. Ohatra, aorian' ny fombafomba dia fafana amin' ny mosara taratasy sady ahosotra ny varavaran' ny trano ny ra, ka fihetsika mitondra fiarovana amin' ny fanahy ratsy izany.
Fahagagana nataon' i Jesoa
Fanalana faditra (finoan-drazana malagasy)
↑ 2,0 et 2,1 Belanger, Jeff (29 November 2003). "Dybbuk – Spiritual Possession and Jewish Folklore". Ghostvillage.com. Nojerena 12 Desambra 2014.
↑ Mohr, M. D., & Royal, K. D. (2012). "Investigating the Practice of Christian Exorcism and the Methods Used to Cast out Demons", Journal of Christian Ministry, 4, p. 35.
↑ Staff (14 May 2012). "Belgium court charges six people in deadly exorcism of Muslim woman". Al Arabiya.
↑ Al-Jawziyya, Ibn Qayyim. Zad al-Ma'ad [Provisions of the Hereafter]. pp. 1/475.
↑ "Exorcising-Ghost Day". Tibet Travel. Tahiry tamin'ny 10 Avrily 2010. Notsidihina tamin'ny 12 Marsa 2010.
↑ Monier-Williams, Monier (1974), Brahmanism and Hinduism: Or, Religious Thought and Life in India, as Based on the Veda and Other Sacred Books of the Hindus, Elibron Classics, Adamant Media Corporation, ISBN 978-1-4212-6531-5, Notsidihina 8 Jolay 2007, 1974, pp. 25–41
↑ Ny mantra dia vaninteny iray na andiam-baninteny tononina miverimberina tsy ankijanona sady manaraka gadona atao rehefa manao fampiasan-tena amin'ny fandinihana mangina na noho ny antony ara-pivavahana.
↑ Ny yajna dia fombafomba lehibe araka ny Veda izay atao mba hanomezam-boninahitra ny andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana sy ny fanatitra ary ny fanaovana sorona.
↑ I Narasimha dia endrika isehoan'ny andriamanitra Vishnu izay miseho amin'ny endrika tapany liona tapany olona mba hanapotehany ny ratsy sy ny fanenjehana ara-pivavahana ary ny loza eto amin'ity tany ity.
↑ Ny Kirtan, izay midika hoe "fitantarana" na "filazana" hevitra na tantara, dia manondro koa zavakanto ara-pivavahana izay manana endrika fitantarana mihirahira hampitana hevitra ara-panahy na ara-pivavahana.
↑ Ny Puja dia fombafomba anatenterahana fanatitre sy fivavahana amin'ny andriamanitra iray.
↑ Ny Garuda Purana dia iray amin'ireo Mahāpurāṇ miisa 18 ao amin'ny lahatsoratry ny fivavahana hindoa.
↑ Ny Yaur Veda na Yaurveda dia iray amin'ireo Veda efatra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Famoahana_fanahy_ratsy&oldid=1039849"
Dernière modification le 10 Novambra 2021, à 09:32
Voaova farany tamin'ny 10 Novambra 2021 amin'ny 09:32 ity pejy ity.